Nagu saabsan - Guanghan N&D Carbide Co Ltd.
Carbide ND wuxuu sameeyaa dhammaan habraacyada tayada sida ku xusan istaandarka ISO iyo API
Waxa la aasaasay 2004, Guanghan N&D Carbide Co Ltd waa mid ka mid ah soosaarayaasha sida dhakhsa ah u koraya uguna horreeya ee Shiinaha ka shaqeeya gaar ahaan carbide tungsten ka samaysan. Waxaan ku takhasusay soo saarista qaybo badan oo ka mid ah dharka duugista saliidda & gaaska qodista, xakamaynta socodka iyo warshadaha goynta.
Qalab casri ah, shaqaale aad u dhiirigeliya, iyo wax soo saar gaar ah oo wax soo saar leh waxay keenaan kharash yar iyo waqtiyo gaaban oo hogaamineed taas oo u oggolaanaysa ND inay siiso macaamiisheeda adeeg iyo qiimo gaar ah.
Laga soo bilaabo xulashada alaabta ceeriin ee caymiska illaa dhammaystirka saxda ah iyo nadiifinta qaybaha adag, ND waxay ku fulisaa dhammaan tallaabooyinka geeddi-socodka ee warshad gaar ah. ND Carbide waxay kaloo bixisaa buundooyin buuxa oo carbide ah oo kujira labada cobalt iyo nickel binders. Kuwaas waxaa ka mid ah buundooyinka yaryar ee hadhuudhka ah ee loogu talagalay codsiyada u baahan isku-dhafka aan caadiga ahayn ee u adkeysiga xirashada iyo xoogga isjiidjiidka, adkaanta loo adeegsado bey'adaha aadka u daxalaysta, iyo darajooyinka isku-xidhka ah ee loo yaqaan 'cobalt binder' ee loogu talagalay codsiyada qalabka wax soo saarka ee dalbanaya adadag sare iyo xoog saameyn
ND Carbide waxay soo saartaa dhammaan carbide-ka ay ku daboolaan heerarka warshadaha iyo sidoo kale buundooyin qaas ah si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisha gaarka ah. Qalabka carbide-ka ee sibidhka ah ayaa loo heli karaa sidii meelo banaan oo dhammeystiran ama qaybo sax ah oo qalabaysan.
Horumarinta qalabka dharka ee lagu farsameeyo qalabka maanta waxay u baahan tahay xalal cusub, ND carbide waxay ku siineysaa alaabada si aad ula kulanto caqabadahaas.
Mas'uuliyadda aadanaha, bulshada iyo deegaanka
Maanta, "masuuliyadda bulshada ee shirkadaha" waxay noqotay mawduuca ugu kulul adduunka. Tan iyo markii la aasaasay shirkadda 2004, mas'uuliyadda dadka iyo deegaanka ayaa had iyo jeer doorka ugu muhiimsan ka ciyaara ND Alloy, taas oo had iyo jeer ahayd welwelka ugu weyn ee aasaasaha shirkadda.
Qof walba waa muhiim
Hubso shaqada / barashada nolosha / qoyska iyo shaqada / caafimaadka illaa hawlgab. At ND, waxaan ahmiyad gaar ah siinaa dadka. Shaqaaluhu waxay naga dhigayaan shirkad adag, waana ixtiraameynaa, qaddarinaynaa oo isu dulqaadanaynaa. Kaliya aasaaskan ayaan ku gaari karnaa diiradda macaamiisheena gaarka ah iyo kobaca shirkadda.
Samafalka dhul gariirka samafalka / ku deeqida qalabka ilaalinta / howlaha samafalka
ND had iyo jeer waxay qaadaan masuuliyad guud oo ku saabsan dareenka bulshada. Waxaan ka qeyb qaadaneynaa yareynta saboolnimada bulshada. Hormarinta bulshada iyo horumarka shirkada lafteeda, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay yareynta saboolnimada isla markaana aan sifiican u qaadnaa masuuliyada yareynta saboolnimada.